အဖွားအိုနဲ့ နေရတဲ့မိဘမဲ့ကလေး ၃ယောက်အား မြေကွက်ဝယ်ဖို့နဲ့ ဈေးဆိုင်လေးတည်နိုင်ဖို့အတွက်မတည်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ယုန်လေး | CeleTrend
အဖွားအိုနဲ့ နေရတဲ့မိဘမဲ့ကလေး ၃ယောက်အား မြေကွက်ဝယ်ဖို့နဲ့ ဈေးဆိုင်လေးတည်နိုင်ဖို့အတွက်မတည်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ယုန်လေး
ယုန်လေးကတော့ အဆိုတော်၊သရုပ်ဆောင်၊ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလိုအောင်မြင်နေတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း အလှူအတန်းဘက်မှာမလှစ်ဟင်းရအောင် သူတတ်နိုင်သလောက်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးလေ့ရှိပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကလည်း ယုန်လေးဟာ ရပ်ကွပ်မီးလောင်မှုကြောင့် အိမ်လေးပါသွားလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဇာတ်သဘင်လောကမှ ညီမလေးတွေအတွက်ပိုင်တံခွန်တို့နဲ့အတူ အလှူငွေများမတည်လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း အဖွားအိုနဲ့ နေနေရသော မိဘမဲကလေး ၃ယောက်အား မြေကွက်ဝယ်ဖို့နဲ့ ဈေးဆိုင်လေးတည်နိုင်ဖို့အတွက် ယုန်လေးကမတည်လှူဒါန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ “ဒီအပတ်အတွက်မီးဘေးသင့်တဲ့ ညီမလေးကိုဦးဆောင်ပြီး လှူပြီးပါပြီ.အဖွားအိုနဲ့ နေနေရသော မိဘမဲ ကလေး ၃ယောက်အားမြေကွက်ဝယ်ဖို့ နဲ့ ဈေးဆိုင်လေး အတွက် ကိုဖြိုးနှင့် ကျွန်တော် ၃သိန်း မတည်ခဲ့ပါတယ် . ကိုယ်စားလှူပေတဲ့ ကိုနိုင်စိုး နှင့်မ ရွှေစင်ငြိမ်းသူ ကိလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ညီလေးကျော်စွာကို သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးမှလည်း ၁သိန်း နှင့်Ma Anna Isaac Izam မှ 5သောင်း အလှူမှာပါဝင်ပေးကျသော ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မများအားလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်”ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားခဲ့တာကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။
ယုနျလေးကတော့ အဆိုတျော၊သရုပျဆောငျ၊ဒါရိုကျတာတဈယောကျအဖွဈနဲ့ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမှုတှကေို ရရှိနတောဖွဈပါတယျ။ ယခုလိုအောငျမွငျနတေဲ့ အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈနပေမေယျ့လညျး အလှူအတနျးဘကျမှာမလှဈဟငျးရအောငျ သူတတျနိုငျသလောကျလိုအပျတဲ့နရောတှမှော ထောကျပံ့လှူဒါနျးပေးလရှေိ့ပါတယျ။
မကွာသေးခငျကလညျး ယုနျလေးဟာ ရပျကှပျမီးလောငျမှုကွောငျ့ အိမျလေးပါသှားလို့ဒုက်ခရောကျနတေဲ့ဇာတျသဘငျလောကမှ ညီမလေးတှအေတှကျပိုငျတံခှနျတို့နဲ့အတူ အလှူငှမြေားမတညျလှူဒါနျးခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။ လကျရှိမှာလညျး အဖှားအိုနဲ့ နနေရေသော မိဘမဲကလေး ၃ယောကျအား မွကှေကျဝယျဖို့နဲ့ ဈေးဆိုငျလေးတညျနိုငျဖို့အတှကျ ယုနျလေးကမတညျလှူဒါနျးပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီအကွောငျးလေးကိုတော့ “ဒီအပတျအတှကျမီးဘေးသငျ့တဲ့ ညီမလေးကိုဦးဆောငျပွီး လှူပွီးပါပွီ.အဖှားအိုနဲ့ နနေရေသော မိဘမဲ ကလေး ၃ယောကျအားမွကှေကျဝယျဖို့ နဲ့ ဈေးဆိုငျလေး အတှကျ ကိုဖွိုးနှငျ့ ကြှနျတျော ၃သိနျး မတညျခဲ့ပါတယျ . ကိုယျစားလှူပတေဲ့ ကိုနိုငျစိုး နှငျ့မ ရှစေငျငွိမျးသူ ကိလညျး ကြေးဇူးတငျပါသညျ။ညီလေးကြျောစှာကို သရုပျဆောငျ စညျဖွိုးမှလညျး ၁သိနျး နှငျ့Ma Anna Isaac Izam မှ 5သောငျး အလှူမှာပါဝငျပေးကသြော ညီအဈကိုမောငျနှဈမမြားအားလညျး အထူးကြေးဇူးတငျပါသညျ”ဆိုပွီးရေးသားဖျောပွထားခဲ့တာကို ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော…။
မင်္ဂလာဦး ဆွမ်းကျွေးပြီး တရားဝင် လက်ထပ်ပြီးမှလျော်ကြေး သိန်း (၁,၀၀၀) တောင်း ခံရတာပာလို့ ပြောပြလာ တဲ့ မောင်မောင်လွင်(ရုပ်/သံ)
ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပေမဲ့လူမျိုးမခွဲခြားတဲ့ လေးစားဖွယ်စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင် ​အောင်​လ